के हो हिस्टेरिया ? महिलामा किन हुन्छ बढी ? जानौं – List Khabar
Home / समाचार / के हो हिस्टेरिया ? महिलामा किन हुन्छ बढी ? जानौं
के हो हिस्टेरिया ? महिलामा किन हुन्छ बढी ? जानौं
admin November 11, 2021 समाचार Leaveacomment 344 Views
हिस्टेरिया भन्ने बित्तिकै यौनसँग सम्बन्धित रोग हो भन्ने धेरैको बुझाई छ । तर, यो बुझाई सही होइन । हिस्टेरिया यौनसँग सम्बन्धित भएर मात्रै लाग्ने रोग होइन । नेपालमा हिस्टेरियाका बिरामीहरू धेरै रहेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको छ ।
हिस्टेरियालाई कन्भर्जन डिसअर्डर पनि भनिन्छ । के हो हिस्टेरिया वा कन्भर्जन डिसअर्डर ? यो लाग्ने कारण र बच्ने उपायबारे नशा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रदिप पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी :-
– एक्कासी बेहोस हुने । (मासहिस्टेरिया भयो भने एकपछि अर्को गर्दै धेरै जना बेहोस हुने ) – टाउको दुख्ने । काम्ने । – शरीरको कुनै एक भाग नचाल्ने । – कोही कोही बिरामीमा बोली नआउने । – लामो लामो श्वास फेर्ने । डर लाग्ने ।
हिस्टेरिया लागे पछि मानिसको मृत्यु भइहाल्छ त?
Previous इन्धनको मूल्य बढ्यो, ग्यास मुल्य सोच्नै नसकिने गरि बढ्यो
Next आहा ! चाइनाको युवक र नेपाली चेलिको प्रेमपछि बिवाह ,अहिले यस्तो घोर्ले सन्तान (हेर्नुस् भिडियो )